▷ yambiro nezve kuwanikwa kwekuchengetedzeka kukanganisa | Ruzivo ZVINO【 2022 】
yambiro pamusoro pekuwanikwa kwezvikanganiso zvekuchengetedza
Hapana mudziyo usina kukuvara. Munguva pfupi yapfuura, National Institute of Cybersecurity yakapa chirevo chekuzivisa vashandisi vane Apple zvishandiso nezvekukosha kwekuita chengetedzo yekuvandudza kweiyo inoshanda sisitimu. Zvese mushure mekunge kambani ine apuro yakarumwa yaona kukanganisa kwakati wandei kunogadziriswa nekuisa iyo vhezheni itsva yesoftware.
Kana iri iyo iPhone uye iPad, kumashure kweiyo brand inonyanya kufarirwa zvigadzirwa, vashandisi vanofanirwa kungwarira kuisa iyo iOS 15.5 uye iPadOS 15.5 masisitimu anoshanda zvichiteerana. Vashandisi veMac vachadawo kugadzirisa kune iyo nyowani vhezheni yeMacOS software.
Iyi gadziriso, kana iwe ukashandisa 'smartphones', inoenderana neese maPhones kubva ku6S zvichienda mberi.
Kana ari mahwendefa, ane ese iPad Pro, iPad kubva yechishanu chizvarwa modhi, iPad Air kubva 2 uye iPad Mini kubva 4.
Kuti uvandudze sisitimu yekushandisa ye iPhone kana iPad, mushandisi anofanira kuziva nezve 'Settings' application uye, kuwedzera kune iyo 'General' sarudzo, ivo vanowana iyo 'Software update' tab. Ingo 'tinya' pairi uye unogona kurodha iOS 15.5 kana iPadOS 15.5 software.
Kune komputa yeMac, enda kuApple menyu> System Zvamada> Software Update. Mukati, iwe unozogona kutarisa zviripo zvinogadziridzwa. Kana mudziyo wakaisa yazvino vhezheni, iwe unowana meseji ichiti "Mac yave kusvika nhasi".
Vese nyanzvi dzecybersecurity vanokurudzira mushandisi kuti asanonoke kuisirwa zvigadziriso. Sezvakaitika paIOS 15.5, mhinduro dzakawanda dzakasanganiswa dzekuchengetedza kukanganisa izvo, kana zvikaonekwa nemacybercriminals, zvinogona kushandiswa 'kubira' terminal yemushandisi.
VeSecurity Forces vanoyambira Hurumende nezve…
Aya ndiwo mashandisiro anoita mask kunze kwe…
Iwo mapeturu madiki anoyambira nezve kushomeka kwemari ye…
Mitsetse mitsvuku iri munharaunda yeUkraine inovhara iyo…
Chii uye nzira yekunyoresa kuMutero pa…
Venezuela inosunungura vanhu vaviri vekuAmerica mushure me…
Iyo minomwe mibvunzo nemhinduro nezve Pegasus scandal
Ndiani akagadzira mutero wemondgage?
Categories Noticias Tags gadziridza, kudonha, iPhone Kubatikiti kufamba